चिनबाट नेपाल आएर कपडा पसल खोल्ने २० बर्षे युवती, ५०० मा ब्लान्केट देखि ज्याकेट सम्म ! (भिडियो)
नेपालमा चीनको सरसामान खासै ब्रान्डेड मानिदैन। चीन बाहेक बेलायत, थाइल्याण्ड, जापानको सरसामान जतिनै गुणस्तरीय हिन भएता पनि गुणस्तरको मानिने तर चाइनिज सरसामान भने जति नै गुणस्तरको भए नि गुणस्तरीय हिन मानिन्छ। नेपालीहरु मार्फत ‘मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन’ भनेर चाइनिज सरसामानको गुणस्तरमा मजाक पनि नबनेको होइन। यस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै नेपालमा चाइनिज सरसामानको व्यवसाय गर्नेको कमि पनि छैन । चीनबाट नेपालमा लत्ताकपडाको सामान ल्याएर हरेक सामान मात्र रु. ५०० मा बेचिराखेकी छन उनी। ‘आफ्नो मामा र मामाको साथीको सलाह सुझाब र सहयोगमा मामासँग नै पार्टनरशीपमा आफुले उक्त व्यवसाय सुरु गरेको’ उनी बताउछिन। यस्तै व्यवसाय चीनमा पनि छ र नेपालमा पनि यो व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना देखेर उक्त व्यवसाय सुरु गरेको उनको भनाई रहेको छ।
उनको आफ्नै फ्याक्ट्री छ । त्यसैले उनले कपडा पनि सस्तोमा लेराउछिन । उनले सिधै उताबाट ल्याउदा आफ्नो सामान सस्तो परेको बताउछिन । उनको भनाई अनुसार यो पसलले गर्दा हाम्रो पसल डुब्यो भन्दै गुनासो समेत गरेको बताउछिन । उनी दशैको समयमा त झनै चिट्ठी समेत आएको अताउछिन । चाईनिज सामान गुणस्तरहिन मानिन्छ, यति सस्तोमा दिदा कसैले शंका त गर्दैनन भन्ने प्रस्नमा उनको भनाई थियो; हामिले निम्न आय भएकालाई लक्ष्यित गरेर यस्तो पसल खोलेका हौ । धेरैले यहाँबाट सामान लगेर बेच्नुहुन्छ तर कतिमा बेच्नुहुन्छ थाहा छैन ।
मात्र रु ५०० मा हरेक समान उपलब्ध भएकोले धेरैले ति सामानहरु दुब्लिकेट, प्रयोग गरिसकेको र गुणस्तरीय हिन हो कि भन्ने आसंका पनि गर्दछन। तर यो आसंकालाई स्पस्ट पर्दै उनि भन्छिन ‘ हाम्रो समान सबै गुणस्तरीयका नै हुन्छन। बिना फाइदा कोहि पनि व्यवसाय गर्दैनन। सानो समान जस्तै कि पर्स, बच्चाको कपडाले हामीलाई फाइदा हुन्छ।’ ‘सुपथ मुल्यमा व्यवसाय गरेकोले मलाई ओरपरबाट धेरै धम्कि पनि आइसकेको छ तर मैले हरेश नखाई आफ्नो व्यवसायमा नै ध्यान दिदै आएको छु’ उनि भन्छिन । त्यस्तै बिगत लामो समय देखि चीनमा बस्दै आएकी पेमछोकी शेर्पा हाल भक्तपुर बस्दै आएकी छिन्। उनले छुट्टै उदेश्यका साथ नेपालमा व्यापार सुरु गरेकी छिन्। बनेपा, सातदोबाटो, सुर्यविनायक र गौशाला गरि नेपालको चार ठाउँमा उनले सुपथ मुल्यको व्यवसाय सुरुवात गरेकी छिन्।